China 6T controller Kugadzira uye Fekitori | LEEK
Tsanangudzo Item Zita 6T DC Mota Controller Voltage 36V Watts 350W Kunyorera 36V350w hub mota Cycle kit Ebike controller yemagetsi mota kit yemagetsi bhasikoro 6 mosfet mukati memutongi, isina mvura yekubatanidza uye yakajairwa yekubatanidza yekusarudza.Square wave sekusarudzika, ndapota tiudze kana iwe unoda sine wave mhando. Iyo matche inobvumirana nematare eKUNTENG LED / LCD. Isu tinopawo controller kesi kuti ive nemutongi. Vatongi vanozoendeswa mushure mekuyedza B ...
Item Zita 6T DC mota Mutungamiriri
Kushanda 36V350w hub mota Kutenderera kit
Ebike mutyairi wemagetsi kit kit yemagetsi bhasikoro
6 mosfet mukati memutongi, isina mvura yekubatanidza uye yakajairwa yekubatanidza yekusarudza.Square wave seyakagadzika, ndapota tiudze kana iwe uchida sine wave mhando.
Iyo matche inobvumirana nematare eKUNTENG LED / LCD.
Isu tinopawo controller kesi kuti ive nemutongi.
Vanodzora vanozotumirwa mushure mekuedzwa
Casing zvinhu: Aluminium
Kukura: approx. 103 * 70 * 35mm
Rated voltage: DC 36V / 48V
Rated simba: 350W
Inoshanda modhi: bhasikoro remagetsi, sikuta yemagetsi.
Anti-kugadzikana, kuchengetedzwa kwechokwadi.
Otomatiki kuzivisa iyo 36V uye 48V.
Otomatiki kuzivisa iyo Horo sensor.
Otomatiki kuzivisa iyo Phase angle ye60 degrees uye 120 degrees.
Yakaderera mwero / E-ABS brake.
Yakakwira nhanho / E-ABS brake.
Brushless mota controller.
Dhizaini dhizaini yekuisa nyore.
NZIRA DZOKUSARUDZA MUDZIMAI?
Kutanga tarisa yako emagetsi mota bhatiri emagetsi mazinga, anoenderana neyakasarudzwa voltage controller, tarisa saizi yeyazvino controller yakamboshandiswa, senge yazvino iri 16A-18A 350W controller, 22A-24A controller iri 450W, 28A -30A controller iri 500W, 31A-33A is 600W controller, 33A-35A is 800W controller, 36A-38A is the 1000W controller, 40A-43A is the 1200W controller, 50A is about 2000W controller. Yakadaro sarudzo sarudza, kana mota yekutanga iri mazana matatu evatongi vatungamiriri tinokurudzira kushandiswa kweakakura, kuti ugone kutora mukana weiyo yakakwira mota kumhanya uye simba.
BRUSHLESS DC MOTOR VANODZIRA 'ZVIMWE ZVIMWE Mabasa akaomesesa ekuchengetedza macheki.
• Ungwaru nemasimba microprocessor.
• Bluetooth zvirongwa zviripo.
• Yakawedzera nzvimbo yekufamba nebhatiri chaji.
Yakawedzerwa hupenyu hwebhatiri.
• Inogadziriswa 60 degree kana 120 degree horo chinzvimbo maseru.
• Njere yekuongorora mashandiro.
• Yakakwirira anti-kupindira uye anti-kuvhunduka kuita.
• Manual cruise basa
• Auto cruise basa.
• Yakaoma / yakapfava kutanga sarudzo basa.
• 3 kumhanya (50% -80% -100% kana mamwe mavhoriyamu) basa
• EBS yakaputsa basa.
• Reverse basa
• Netural mashandiro.
• Mberi / regedza sarudzo basa
• Anti-mbavha basa.
• Kumhanyisa kudzikamisa basa
• Yakadzika voltage & pamusoro pemagetsi ekudzivirira
• Pamusoro pekudziya kukuru.
• Throttle kukanganisa kuchengetedza basa kana uchitanga.
• Throttle kukanganisa kuchengetedza basa kana uchimhanya.
BRUSHLESS DC MOTOR VANODZIRA VANODZIDZA Vachishandisa akangwara MPU.
Kuderera kwesimba kushandiswa muPamusoro-kumhanya, iine synchronous kugadzirisa PWM redunhu.
Bhatiri razvino muganho basa rinogona kurebesa hupenyu hwebheteri seti.
Kukuru kutanga kwazvino kupa kwakakwira kutanga kumhanya.
Yakakwirira anti-kupindira uye anti-kuvhunduka kuita.
Mamiriro eUSA anoratidza akasiyana mhosho ruzivo, inobatsira vashandisi kuongorora uye nekuchengetedza mutungamiriri zviri nyore.
Nebasa rekuchengetedza bhatiri, rinodzivirira pamhepo yakadzika & pamusoro pemagetsi nekuderedza kana kucheka bhatiri razvino kubuda.
Nebasa rekudzivirira rekushisa, ino yekudziya yekudziya & muripo wedunhu inopa inogara iripo muganho wenguva durng iunder / pamusoro pekupisa mamiriro, saka inogona kudzivirira iye mutungamiriri uye bhatiri mushe.
Inoenderana ne60 ° / 120 ° horo sensor mune zvese zviri zviviri.
Throttle chengetedzo basa regedza mutongi kana waya dzekubaya dzikavhurika, zvakare dzinogona kudzivirira iyo yekushanda mashandiro kana kiyi yemagetsi yakavhurwa nepo throttle ichiiswa (Yechisarudzo).
Manual cruise / auto cruise basa inowanikwa (Yechisarudzo).
Auto-enzanirana neese marudzi emota.
Inogadziridzwa yakapfava / inokurumidza kutanga modhi.
Pamhepo / isingaenzaniswi yekuvandudza basa inowanikwa.
BRUSHLESS DC MOTOR VANOGONESA 'NZVIMBO ZVINOGONESESA zvinogadziriswa pamusoro / pasi pemagetsi kudzivirira
basa rinopa chairo-nguva bhatiri yazvino kuongorora (Zvekusarudza)
Yakasarudzika nguva nenguva kugadziridzwa kunopa pamusoro pemagetsi ekudzivirira mu microsecond mitengo.
Ine sensor yekupisa yekutsvaga chero ruzivo rwekupisa.
Configurable EABS brake system inoitwa neakasimba / isina kusimba braking chiratidzo (Nezvokuda)
Kuchengetedza kudzora basa, kudzoresa kumhanya kunogona kumisikidzwa ne30% kusvika 50% yekumhanyisa kumhanya
Kupa + 5V simba kumahoro sensor ine pamusoro pazvino kudzivirira,
Kugadziridza Kwekutumira, Kusatsigira uye Kudzosera mashandiro (Zvekuzvidira)
3 waya kuwana yekumhanyisa kutonga, yekuwedzera kugovera + 5V magetsi sosi
5 tambo yekuwana yeiyo sensor sensor chinobatanidza, hapana horo sensor yekushandisa inowanikwa yesarudzo
Yechokwadi-nguva bhatiri yazvino yekutarisa system ita shuwa kuti kubuda kwazvino hakuzopfuure iwo akanyanya mabhatiri ari kushanda azvino.
Pashure: 18T mutungamiriri
Zvadaro: Brashi mota
E Scooter Mutungamiriri
Electric Scooter Mutungamiriri
Electric Scooter Yekukurumidza Mutongi
Magetsi Tricycle Mutungamiriri
Vanokurumidza Scooter Mutungamiriri
Hub Mota Controller
Midhudhudhu Simulator Mutungamiriri
Scooter Yekumhanyisa Controller
Chiedza Bhuruu Midhudhudhu, E Bhasikoro Kukanya, 22.5 Mavhiri Evhiri, Yakanakisa Lithium Midhudhudhu Battery Chaja, Rutivi Mira Puck, Kufambisa Pane Bhasikoro,